Blaogy – Fiangonana Batista Biblika Ankadivato
Fotoana fanompoam-pivavahana tokana ho an’ny rehetra
Haleloia. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho,Eo amin’ny fivorian’ny marina sy ny fiangonan-dehibe.Lehibe ny asan’i Jehovah, Ka dinihin’izay rehetra mankasitraka azy.Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay.Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra…
Hatry ny fony fahakeliko no efa nahatsiarovako fa teo ambanin’ny masoko mandrakariva ireo andinin-tSoratra Masina roa ireo, isaky ny miditra ao an-tranom-piangonana ao Ankadivato aho. Ary raha misy angamba andininy ao amin’ny Baiboly izay hain’ny mpiangona rehetra tsianjery, eny hatramin’ireo…
Manoloana ny tsimokaretina SARS-CoV-2 izay mikasika firenena maherin’ny 190 dia izao ny zavatra azo antoka: voatery nanisy fanitsiana ny fomba fiaina andavanandro isika ary tsy hitovy amin’ny teo aloha intsony, farafahakeliny ho an’ny taranaka ankehitriny. Toa mampanahy ihany ny misaina…
Daty manan-tantara ho an’i Malagasy ny Alahady 30 Jiona 2019, raha toa ka nandresy ny ekipa kalazan’i Nizeria tamin’ny isa 2-0 ny Barea, dia ny ekipam-pirenena malagasy, hany ka tafakatra tamin’ny ampahavalon-dalana ao anatin’ny fiodinana famaranana ny Fifaninana izay ho…
Manokana fotoana ho an’Andriamanitra (2)
Tapany faharoa amin’ny torolalana mikasika ny fanokanana fotoana manokana ho an’Andriamanitra isan’andro. Azonao jerena ato ny tapany voalohany. Fotoam-pandinihana Baiboly isa-maraina Mifoha: 5:30Fotoana: isan’andro, 5:40-6:15Toerana: ohatra: ny latabatra fisakafoana 5:40-5:45 – Vavaka fifonana, fiderana ary fisaorana • Mankanesa eo anatrehan’ny Rainao amin’ny…
Manokana fotoana ho an’Andriamanitra (1)
Ary Jesosy namaly hoe: ny voalohany dia izao: Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany; koa tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra Marka 12:29-30 Raha tena…
Fanokanana Loholona : miroso amin’ny asa tsara
Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan’Andriamanitra, izay novidiny tamin’ny rany Ny Baiboly, Asa 20:28 Alahady 27 Janoary. Tamin-kafaliana lehibe no nandraisan’ny fiangonana ara-pomba ofisialy an’Andriamatoa isany : Tiana Rajaona,…
FBB Ankadivato, Fitandremana, Fotoan-dehibe
Krismasy 2018 : Ny anaran’i Jesosy irery ihany no ahazoana famonjena
Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena Ny Baiboly, Asa 4:12 Io andinin-tsoratra masina io no teny filamatra ho entintsika mankalaza ny Tompo amin’ity Krismasy 2018 ity. Ny…
FBB Ankadivato, Krismasy 2018, Noël 2018